University of Regina - Waxbarashada Kanada. Study Magazine Abroad
macluumaad faa'iido leh
University of Regina Details
City : Regina
gaabinta : U of R
aasaasay : 1911
Ardayda (qiyaastii.) : 15000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Regina
Qor at University of Regina
The University of Regina waxaa jaamacadda cilmi dadweynaha ku yaalla Regina, Saskatchewan, Canada. la aasaasay 1911 sida dugsi gaar ah firqooyinka sare ee Church Methodist ee Kanada, waxaa bilaabay urur la University of Saskatchewan sida kulliyad yar ee 1925, oo waxaa lagu disaffiliated by Church oo si buuxda gacanata ugu University ee 1934; in 1961 waxaa gaadhin xaaladda degree-bixinta sida Campus Regina reer University of Saskatchewan. Waxa uu noqday jaamacadda madaxbannaan ee 1974. The University of Regina uu leeyahay diiwaan gelinta ee ka badan 12,000 ardayda buuxa iyo waqti-dhiman. Wargeyska arday jaamacadeed ayaa, Carillon The, waa xubin ka mid ah CUP.
The University of Regina waa si fiican-sar isagoo diiradda la saarayo waxbarashada khibrada iyo bixiyaa layliyo, meeleyn xirfadeed iyo practicums lagu daro boosaska waxbarasho iskaashi ee 41 barnaamijyada. Tani khibrad waxbarasho iyo shaqo-diyaarinta focus waxaa sii iftiimiyay marka, in 2009 Jaamacadda Regina bilaabay Barnaamijka Guarantee UR ah, dammaanad ah barnaamij gaar ah oo ardayda ka qayb bilaabay a xirfadiisa guul ka dib markii qalin jebinta by waxbarashada siyaadinta waayo-aragnimo in la gaaro gaar ah waxbarasho, mustaqbalkiisa ciyaareed iyo nolashiisa gool. heshiis Iskaashi la leh shirkadaha taaj gobolka, waaxaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa ka caawisay Jaamacadda Regina ardayda meel labadaba fursado waayo-aragnimo shaqo iyo shaqo caawimo faa'iido post-waxbarasho.
The qaaraan ugu weyn iyo masuuliyadda Xafiiska Qorshaynta Sahayda waxaa ka mid ah:
isku dubaridka iyo dayactirka xogta tirakoobka loo isticmaalo caalamka;
gudbinaya jawaabaha sahanka ka wakiil ah Jaamacadda;
siinaya macluumaad macne leh oo la qiyaasi karo in ay hay'adahani u ah jaamacadda iyo Federaalka Colleges;
caawinaya in dhamaystirka Framework Cabbiraad Performance ah;
dadaalaya joogta ah macluumaadka guud campus ah;
dib u sahan jeediyay via Guddiga Maaraynta Survey ah;
la shaqayna dowladda gobolka maalgalin;
la shaqayna schoolboards maxaliga ah ee ujeedada guusha laabteen; iyo,
oo wakiil ka ah University ee shirarka qaran iyo caalami ah oo kala duwan.
Dugsiyada / kulliyadaha / Departments / koorsooyinka / Caqlina
Engineering & Science Applied
Kenneth Levene Graduate School of Business
Kinesiology & Studies Caafimaadka
The Faransiiska University City
Media, Art, iyo Performance
Paul J. Hill School of Business
The University of Regina waa jaamacad non-madaahibteenu, oo koray out of Regina College, asaasay 1911. In jawaabta si toos ah abaalmarinta of University of Saskatchewan in Saskatoon halkii Regina, Church Methodist ee Kanada aasaasay Regina College ee 1911 on College Avenue ee Regina, Saskatchewan, laga bilaabo diiwaan gelinta ee 27 ardayda; waxay ahayd ku xiga si ay haatan dheer-baaba'ay St Chad ayaa College ee (seminary fiqi ahaaneed tababarka ee sheekh Anglican) iyo Qu'Appelle Ibraashiga School, sidoo kale on College Avenue. James Henry Puntin (Injineerka) loogu talagalay dhismayaasha dhowr on campus oo ay ku jiraan: Regina Methodist College (1910); East & West Towers (1914); Ladies deganaanshaha (1914); Gymnasium (1925); Power Plant (1927); Music & Arts Building (1928).”In 1928, Darke Hall waxaa la dhisay on College Avenue, [d]escribed…sida “tiyaatarka ah lagu naalloon karo, mid ka mid ah oo magaalo yar oo kula tartami kartaa.”
In 1934 Regina College oo qayb ka ah University of Saskatchewan noqday. The University of Saskatchewan hal a, Jaamacadda gobolka dadweynaha abuuray 1907 waxaa qaabeeyey jaamacadda gobolka American, iyadoo culayskana la saarayo shaqo dheeraad ah iyo cilmi dhaqmo. maamul ayaa waxaa qaabeeyey ah University of Act Toronto, 1906 taas oo la aasaasay nidaam laba aqal ee dowladda jaamacad ka kooban duqowdii a (awood), masuul ka ah siyaasadda tacliinta, iyo guddiga ka mid ah taliyayaasha (muwaadiniinta) xakameynta gaar ah siyaasadda maaliyadda iyo waxayna lahayd amar rasmi ah in dhammaan arrimaha kale. Madaxweynaha, magacaabay guddiga, waxay ahayd in ay bixiyaan xiriir ka dhexeeya 2 jirkooda iyo in ay qabtaan hoggaanka hay'adaha. In qaybta hore ee qarnigii this, waxbarasho xirfadeed balaariyay ka baxsan beeraha dhaqanka ee fiqiga, sharciga iyo daawo. tababarka Graduate ku salaysan model-u waxyoonay Jarmal American ee shaqada koorsada khaas ah iyo dhamaystirka sha cilmi ah la soo bandhigay.
Regina College bilaabatay urur rasmi ah la University of Saskatchewan sida kulliyad yar ee bixiya koorsooyinka jaamacadda aqoonsan in 1925 in kastoo sii sida kulliyad madaahibteenu ah haatan United-Church of Canada, bedelka si Church Methodist ah. Regina College sii College Junior ilaa 1959, markii ay heshay aqoonsi shahaado-siinta buuxa sida campus labaad ee Jaamacadda Saskatchewan.
Si kastaba ha ahaatee, in 1934, Church United la dhaqaale adag u riixriixan by Depression Great iyo kiis kasta oo ay taariikhda ka greatEgerton Ryerson ee u doodid degdeg ah waxbarashada dadweynaha universal free sameeyey ay ku lug dugsiyada gaarka anomalous. Waxaa sidaas si buuxda u dhiibay Regina College u University of Saskatchewan. Regina College iyo bedelka Campus Regina of University of Saskatchewan iyo University of Regina leeyihiin - waxaana suurto gal kama '- ceshan dhiga Methodist “sida kan adeega” (Luke 22.27).
siyaasadda waxbarashada jaamacadda bilaabay 1960 jawaabay cadaadiska dadweynaha oo aaminsan in waxbarashada sare ahaa furaha ah inay cadaalada bulshada iyo wax soo saarka dhaqaale ee shakhsiyaadka iyo bulshada. In 1961 College la baxshay Jaamacadda Saskatchewan, Regina Campus. In 1974 waxa ay noqotay University madaxa banaan ee Regina.
The raacsan asalka Church United waa, si kastaba ha ahaatee, calaamad Xuso heeryadii inay shir ka, dib u bilaabay by jaamacadda si loogu isticmaalo rasmi ah mid ka mid ah magaalada hoose ee ugu danbeysay ee United Kaniisadaha, taas oo la xidhay ee 1990.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Regina ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Regina on Map
Photos: University of Regina rasmiga ah Facebook
La wadaag info waxtar leh la saaxiibadaa
University of dib u eegista Regina
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Regina.
FADLAN OGOW: EducationBro Magazine aad siinaysaa awooda in uu akhriyo info ku saabsan jaamacadaha at 96 luqadood, laakiin waxaannu idinka baryaynaa in ay ixtiraamaan xubnaha kale iyo ka tago comments in English.
na soo raac
jaamacadaha kale ee Kanada
University of Saskatchewan Saskatoon
Jaamacadda Queen Kingston
University of Sherbrooke Sherbrooke
University of Waterloo Waterloo
Laval University CNIB City
Waxbarashada Bro waa waxbarasho dibadda magazine. Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho dhammaan macluumaadka loo baahan yahay oo ku saabsan waxbarashada sare dibadda. Waxaad ka heli doontaa wax badan oo ah talooyin waxtar leh iyo talo, tiro badan oo wareysiyo waxtar leh ardayda, barayaasha iyo jaamacadaha. Nala joog iyo soo saarid dalalka oo dhan iyo goobaha waxbarashada.
543 Jaamacadaha 17 wadamada 124 Articles 122.000 Ardayda
Hel In Touch
News ugu dhakhsaha badan
dalalka Baro ugu dhakhsaha badan
Baro mustaqbalkiisa ugu dhakhsaha badan
Wareysiyo ugu dhakhsaha badan
Codso hadda xarumo ugu dhakhsaha badan
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah|Site Shuruudaha & Shaac